लुटेरामाथि यसरी भारी परिन् एउटी आमा, सबैतिर उनको बहादुरीको प्रशंसा (भिडियोसहित) | Rajmarga
लुटेरामाथि यसरी भारी परिन् एउटी आमा, सबैतिर उनको बहादुरीको प्रशंसा (भिडियोसहित)
ब्राजिलमा महिला र बच्चाहरुलाई लुट्ने उद्देश्यसहित हतियारसहित पुगेका लुटेराको सामना एक जना महिला प्रहरी अधिकारीसँग भयो । यो घटनाको भिडियो केहीका लागि विचलित गर्ने खालको पनि हुन सक्दछ ।
ब्राजिलको सबैभन्दा ठुलो सहर साओ पाउलोको एउटा निजी विद्यालयको गेटमा आमाहरु आफ्ना बालबालिकाका साथ उभिएका थिए । यही क्रममा एक जना लुटेरा हतियारसहित त्यहाँ पुगे ।
उसले पेस्तोल देखाउँदै महिलाहरुलाई लुट्ने कोशिस गरे । तर लुटेरालाई अन्दाजा पनि थिएन कि महिलाहरुबीच ब्राजिलको मिलिट्री प्रहरी अधिकारी कातिया दा सिल्भा सास्त्रे पनि छिन् ।
कातियाको पर्समा पनि पेस्तोल थियो । लुटेरा हतियार देखाएपछि मच्चिएको भागदौडबीच कातियाले पनि आफ्नो पेस्तोल निकालिन् र लुटेरामाथि फायर गरिन् । यो घटनाको भिडियो सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भयो ।
गोली लाग्ने बित्तिकै २३ वर्षका इलिभेटन नेभेस जमिनमा ढले । प्रहरी अधिकृत कातियाले आक्रमणकारीको पेस्तोल खुट्टाले पर फ्याँकिन् र उनले लुटेरालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइन् । त्यसपछि घटनास्थलमा प्रहरी आइपुग्यो ।
आक्रमणकारीलाई अस्पताल लगियो, जहाँ उसको मृत्यु भयो । दुई छोरीकी आमा कातिया २० वर्षदेखि प्रहरी फोर्समा छिन् । घटनापछि कातियाले भनिन्–मलाई थाहा थिएन कि उसले के गर्नेछ, के उसले बालबालिका, आमाहरु र त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि गोली चलाउनेछ । मैले बस आमा, बच्चाहरु र स्वयम आफ्नो छोरीहरुलाई बचाउने कोशिस गरेँ ।
कातियासहित कयौ आमा र उनीहरुका बालबालिका मदर्स डे मनाउने कार्यक्रममा भाग लिन स्कुल पुगेका थिए । साओ पाउलोका गभर्नरले कातिया दा सिल्भा सास्त्रेलाई मदर्स डेका दिन प्रदर्शन गरेको बहादुरीका लागि सम्मानित पनि गरेका छन् । एजेन्सी
Previous post: जेठ महिनाभर अधिकमासःविशेष कामनाका कर्म नगरौँ, के-के गर्न हुन्छ ? के-के गर्न हुँदैन ?
Next post: ‘म किन गरीब ?’ भन्ने प्रश्नमा बुद्धले दिएको यो जवाफ सुन्दैमा धनी बनिन्छ